Amafomu e-Urticaria - Ipulatifomu Yesiguli Yesiyaluyalu Yomhlaba Wonke Nomoya
Amafomu e-UrticariaIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-04T13:45:39+01:00
Ukukhuluma i-urticaria kuyefana nokukhuluma ngamakhanda: zombili izimbangela namafomu kuyehluka kakhulu. Ububanzi busukela kokungapheli, ukungakhululeki okuncane kuze kube yiminyaka yokuhlushwa okungapheli nokusuka ezicupheni ezicacile, ezingavikeleka kalula eziya ezimweni (hhayi ezimbalwa) lapho imbangela ingatholakali khona. Futhi, akulula ngaso sonke isikhathi ukukhomba imingcele phakathi kwe-urticaria nezinye izifo. Ezinye izinhlobo zokwaliwa komzimba zibukeka kakhulu njenge-urticaria, futhi izinqubo kumasosha omzimba nasemzimbeni nazo ziyafana, kodwa futhi ngokwengxenye zihluke kakhulu kunezinqubo ezibonwayo, ngokwesibonelo, ufuba, i-hay fever, noma i-classic ukudla kokudla.
Izithombe ezahlukahlukene zemitholampilo ze-urticaria zingahlukaniswa ngokwesikhathi sazo sibe ngama-acute (ngaphansi kwamaviki ayisithupha) futhi ezingapheli (ngaphezu kwamaviki ayisithupha) kanye namaqembu amakhulu amathathu ngokwenkambo yazo:
i-urticaria ebonakalayo kanye
iqembu lezinye izinhlobo
Amafomu we-urticaria okuzenzakalelayo
I-urticaria ehlasela kakhulu: Isifuba noma i-angioedema ziyakheka futhi zibune ngemuva kwamahora noma izinsuku — kamuva nje ngemuva kwamasonto ayisithupha.
I-urticaria engapheli yokuzikhethela: Kwakhiwa amaHives noma ama-angioedemata; izimpawu ziyaqhubeka isikhathi esingaphezu kwamasonto ayisithupha.
Amafomu we-urticaria engokomzimba yilawa:
I-Urticaria factitia: Ukuhlikihla, ukuklabha, noma ukukhuhla isikhumba.
I-Cold urticaria: Ukuxhumana phakathi kwesikhumba nokubanda.
Ukushisa i-urticaria: Ukuxhumana phakathi kwesikhumba nemfudumalo / ukushisa.
I-urticaria yelanga: Ukukhanya kwe-UV noma ukukhanya kwelanga
Ingcindezi urticaria: Ingcindezi
Ukudlidliza i-urticaria / i-angioedema yokudlidliza: Ukudlidliza
Amanye amafomu yiwo
I-Aquagenic urticaria: Ukuxhumana phakathi kwesikhumba namanzi.
I-Cholinergic urticaria: Amazinga okushisa aphakeme (ngokwesibonelo ngenxa yokugeza okushisayo).
Xhumana ne-urticaria: Ukuxhumana phakathi kwesikhumba nezinto ezithile.
Ukuzivocavoca okubangelwa ukuzivocavoca umzimba / i-anaphylaxis: Uhlobo lomzimba.
Yini i-urticaria yokuzenzakalela futhi kungani sihlukanisa phakathi kwe-urticaria ebukhali nengapheli?
In i-urticaria ezenzakalelayo, amasondo nokunye ukungakhululeki kwenzeka "ngaphandle kokuluhlaza okwesibhakabhaka", okungukuthi, iziguli ezithintekile azikwazi ukubikezela ukuthi ukuhlasela okulandelayo kwesifo sazo kuzokwenzeka nini futhi kaningi azikwazi ukuqaphela ukuhlaselwa okunjalo. Ku-urticaria yokuzenzakalela zonke izingxenye zomzimba zingathinteka.
In i-urticaria enamandla, i-subtype ejwayelekile kunazo zonke, kunamaviki angama-6 wokungakhululeki, okungukuthi, i-urticaria ebucayi iyanyamalala ezinsukwini ezimbalwa kuya emasontweni ngemuva kokubonakala kokuqala kwemifantu noma ukuvuvukala kwesikhumba esijulile (imvamisa ngendlela engaqondakali njengoba ifikile). Ezimweni eziningi zemifantu ebukhali kunokuhlaselwa okukodwa okungahle kudale ukukhathazeka okukhulu-hhayi ngoba izimpawu bezingaziwa ngokuphelele kulabo abathintekayo kuze kube manje.
I-urticaria engapheli, okungukuthi, i-urticaria yokuzikhethela ehlala isikhathi esingaphezu kwamasonto ayisithupha, iningi kakhulu kune-urticaria ebucayi.